Ungamfumana njani umnini we-iPhone elahlekileyo okanye ebiweyo | IPhone iindaba
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, Ukhuseleko lwePhone
Okumangalisayo kukuba, ayizibiwe kuphela ii-iPhones, kodwa zilahlekile. Kufuneka wenze ntoni xa udibana nayo? impendulo ecacileyo yile zama ukuyibuyisela kumniniyo, kodwa sihlala sisoyika ukwenza inkqubo ephela isezandleni zomntu onezinto ezincinci kunezethu.
Ukufumana umnini ofanelekileyo kunokuba nzima ukuba ikhowudi yokutshixa icwangcisiwe, kodwa ukuba i-iPhone oyifumeneyo iyasebenza ungafaka amanye amaqhinga endiwacebisayo ukukunceda unxibelelane nomnini kwifayile ye- Ukurekhoda ixesha.
1 Ukuba akukho khowudi yokutshixa, jonga iifowuni zakho zamva nje
2 Ukuba kukho ikhowudi yokudlula, cela uSiri akuncede
3 Gcina ifowuni uphendule iifowuni ezingenayo
4 Fumana i-IMEI kwaye unxibelelane ne-ISP yakho
5 Iinkonzo zethu
6 Malunga nee-iPhones ezilahlekileyo okanye ezibiweyo
Ukuba akukho khowudi yokutshixa, jonga iifowuni zakho zamva nje
Akukho mntu uthanda ukuhlasela imfihlo yomnye umntu, kodwa ekugqibeleni unokwenza okwahlukileyo ukuba kungunobangela olungileyo.
Khangela phakathi kwabo Iifowuni, zakutshanje okanye ezo zichongiweyo njenge «Casa»Kwaye ubize, baya konwaba ngakumbi ukuya esiphelweni sehlabathi ukuya kuthatha i-iPhone yabo. Cinga ukuba bakubizele ukukuxelela, akukho mntu uya kukhumbula ukuba ujonge uluhlu lweefowuni.
Ukuba kukho ikhowudi yokudlula, cela uSiri akuncede
Uninzi lwabantu aluqondi ukuba nokuba nekhowudi ye-iPhone, unokuhanjiswa ngokwenza izinto ezinje ngokutsala umnxeba okanye ukuthumela imiyalezoNgaphandle kokuba kunjalo, bakhubazekile oku kusebenza kuseto.
Ezinye zezinto onokukhetha kuzo ziya kuba; «Fowunela ekhaya«,«Fowunela umama"Okanye"Fowunela utata»
Gcina ifowuni uphendule iifowuni ezingenayo
Ukuba akukho nto isebenzayo, sinayo kuphela gcina i-iPhone ivuliwe kwaye ihlawulisiwe Ndikulindile, nokuba umnini umnxeba, okanye umhlobo onokunxibelelana naye ngenye indlela.
Nangona kunokubonakala kungaqhelekanga ukuphendula umnxeba womnye umntu, khumbula oko uyenzela loo mntu, ayenzelwanga wena okanye ngenxa yezizathu ezincomekayo.
Fumana i-IMEI kwaye unxibelelane ne-ISP yakho
Yonke i-iPhone inenombolo eyahlukileyo ebizwa ngokuba yi-IMEI eprintiweyo kwenye indawo. Ungasebenzisa olu lwazi ukulandelela umnini. Ukuba i-iPhone ivuliwe, ungabona ifayile ye igama lenkampani yefowuni kwikona ephezulu ngasekhohlo, oku kunokuba sisiqalo sokufumana umnini.
Le nkampani Uya kufuna kuphela i-IMEI ukukunika inkxaso yesiphelo sendlela kwaye ekugqibeleni uncede ukufumanisa umnini.
El IMEI ungayifumana ngokwasemzimbenie ku:
I-iPhone 5s, i-iPhone 5c kunye ne-iPhone 5: Ishicilelwe kwiphepha elingasemva, indawo esezantsi.
I-iPhone 4s, i-iPhone 4, i-iPhone 3GS kunye ne-iPhone 3G: Susa itreyi yeSIM kwaye uyakufumana i-IMEI kunye nenombolo yesiriyeli eprintiweyo.
Isizukulwana sokuqala se-iPhone: Ishicilelwe kwiphepha elingasemva, indawo engezantsi.
I-IMEI eprintiweyo kuzo zonke ii-iPhones Amanani ama-15. Ukuba umnini we-iPhone ekuthethwa ngayo une-ISP CDMA, njengeVerizon okanye iSprint, Ufuna kuphela amanani ali-14 okuqala lwelo nani, ke lishiya nje inani lokugqibela.
Ukuba ubona ukuba ukhona ukukwenza nzima kakhulu, khumbula ukuba thina sineenkonzo ezithile oko kunokukunceda, uthanda;
Fumana inkampani ye-iPhone kwaye ube nakho ukunxibelelana nenkampani.
Yazi ukuba ukhululekile kwaye kufuneka uthathe enye ikhosi.
Yazi ukuba i-iPhone itshixiwe okanye ibiwe kwaye uxele kwi Mapolisa.
Malunga nee-iPhones ezilahlekileyo okanye ezibiweyo
Nceda uqaphele ukuba uninzi lwabanini banokusebenzisa Khangela i-iPhone yam ukulandela umkhondo kwesixhobo okanye banokufowunela inkampani yakho ukuba ichaze ilahleko okanye ubusela bayo kwaye qhubela phambili kwi-IMEI lock. Ukuba oku kuyenzeka, ifowuni isenokungasebenzi kunxibelelwano oluninzi.
Ukuba uyifumene kwaye awuyibuyisi, kusenokwenzeka ithathwa njengebiweyo. Ukuba iyasebenza Khangela i-iPhone yam yenziwe yasebenza kwaye umnini ukulandelela ngempumelelo, kukho ithuba lokuba vela emnyango wakho ngokunyanzeliswa komthetho ngesandla ngesandla. bucala ngasekhohlo hayi isiphelo esihle kwiinjongo ezilungileyo. Gcina ukhumbula ukuba izigqibo ozenzayo ukusuka kwisibini xa uthatha i-iPhone yakho zinokukuchaphazela kakhulu.
Ukuba ukhe wazama nawaphi na amanyathelo angaphambili uya kuba nakho ukungqina oko ukhe wazama ukubuyisa i-iPhone, kodwa akukho namnye unokukuhlutha yona. Vavanya kakuhle ukuba wenzani ngalo mbandela ngaphambi kokuqhubeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ukhuseleko lwePhone » Ungamfumana njani umnini we-iPhone elahlekileyo okanye ebiweyo
Izimvo ezi-62, shiya ezakho
Ndikhululekile malunga nokufumana ifowuni yam nangakumbi malunga nokuzibeka emnyango wendlu yakho, ukuba inemida yempazamo eyi-50 yeemitha, ebaleni elinabantu aba-5 ukuba ungayifumana, kodwa kwisitalato esine uluntu lwabamelwane, akukho mntwana.
Ndilahlekile kube kanye kwaye i-iPhone yam isilele ngaphantsi kweemitha ezi-5 ...
Iimitha ezingama-50 kukuqikelelwa, inkonzo yendawo isekwe kwindibaniselwano yeGPS, iWiFi, iinethiwekhi zikawonkewonke kunye neeBecacons. Ngokucacileyo ayifani ukuba kwidolophu elahlekileyo kwiiPyrenees kunaphakathi kweziko elikomkhulu njengeMadrid okanye iBarcelona.
Kuxhomekeka kwindlela onokuthi uchaneke ngayo kwaye ukuba awukho kwibloko yeenyosi etshixelwe ubomi, unokufumana umsebenzisi, kuya kufuneka ufune njalo.
Enkosi ngegalelo lakho!
UCristian Camilo Guarin Mendoza sitsho
NDIFUMANE IPHONE MODEL A1387. INESIQINISEKISO SI-4-DIGIT KULO. NGEKE NDIXELELE USIRI NGUBANI LE IPHONE? SUKUYEKA UMNTU UKUBA UMNTU UYAZI ENGAKWENZA UKUQHAGAMSHELANA NOMNINI-MNTU NCEDA UPHENDULE KULO MBUZO NDIHLALA BOGOTA COLOMBIA DEN SOLUTIONS NDIZAMA UKUWUVULA UKUJONGA KUQHAGAMSHELWANO KUKUPHELA KWENTO ENDIKUFUMANELEYO UKUYIVIMBA
Phendula Cristian camilo Guarin mendoza
INYANISO YOKUBA NDIGWATYELWE, KWAKUTHENGWA OKUNGABIYO, INTOMBAZANE EYANDITHENGISELE LE IPHONE 6 ayisaphindi iphendule kum ne-IMEI NDIFUMANE IPHONE. UKUMXELELA OKWENZEKILEYO KUNI UNGANDINCEDA OKANYE INTO?
Njalo ngaphambi kokuba uthenge i-iPhone esetyenzisiweyo kufuneka uqinisekise ukuba ayinayo into esebenzayo, unokuyibona kwi-icloud.com/activationlock
UJavier Diaz sitsho
Ukuba uyazi apho akhoyo ngaphezulu okanye ngaphantsi, uyambiza kwaye unokummamela, ngakumbi ukuba unengoma eyahlukileyo kwezinye.
Phendula kuJavier Diaz
Ungathini xa simsa emapoliseni ukuze abuye?
Ngenye indlela, kodwa zimbini izinto ezihlala zikhuthaza ukufuna ukuyibuyisa ngaphambi kokuya emapoliseni:
1. Ukuba sinoloyiko lokuba amapolisa aya kuyigcina, qaphela ukuba iifandesi ezenziwa yimikhosi yezokhuseleko zikarhulumente zigubungela zonke iintlobo zeepropathi ezithathiweyo ngaphandle kwee-laptops, iikhamera, iifowuni, njl. Ukuthandabuza kuza kubemi.
2. Lindela imbuyekezo yembuyekezo.
Kodwa njengayo yonke into, kukho izinto ozithandayo kunye nezinto onokukhetha kuzo wonke umntu, enkosi ngegalelo lakho.
UDavid il signorino sitsho
Ukuba i-iPhone ayinayo ikhowudi yokutshixa isikrini, unokuya kuseto> iCloud okanye Useto> Imeyile, abafowunelwa, ikhalenda. ukubona ukuba yeyiphi idilesi ye-imeyile yomnini wesiphelo kwaye ubhalele loo mntu ukuze kungaxhomekeki ekugcineni i-iPhone kwibhetri de ube ukufowunela okanye ukufowunele.
Phendula kuDavid Il signorino
Kulungile, andikhange ndiwelele oku ...
Enkosi David ngokwabelana ngayo!
Kuyenzeka ukuba utsalele umnxeba iAppleCare ukuqinisekisa ukuba i-terminal ivuliwe okanye hayi kwaye / okanye ukuba ukuvulwa kwesitshixo kuyasebenza ukuba asinakho ukufikelela kuseto lwe-iCloud. Banokukunika olu lwazi simahla.
Ndiyathandabuza ukuba baya kukunika ulwazi malunga nesiphelo sendlela ukuba ufowunela ngaphandle kolwazi malunga nomnini, kuba kuya kufuneka uzichaze kanjalo, kodwa abahambelani ne-LPD yaseSpain.
Ukuba uya kwiVenkile yeApple, ungabacela ukuba bakuxelele ukuba ngubani igama lakhe kwaye babonelele ngedatha yabo
Ukuba bayayenza, bayaphula umthetho-nkqubo wabo wokukhusela idatha, ayisiyiyo into enokukhethwa, cinga ukuba ngabom ndibile isiphelo sendlela kwaye ndiya kuApple ukuze undinike idatha, ndisithi ndifuna ukuyibuyisa, kwaye banike umniniyo idatha…. Enkosi ! Ngoku ndingazenza ubuqhetseba kwaye iApple inesikhalazo ngokungayihloniphi i-LPD.
Kodwa kulungile ukuba sonke sinegalelo ekufumaneni olona khetho lubalaseleyo, enkosi Jaume!
Molo, jonga, yenzekile kum into yokuba nditshintshe iselfowuni ye-5 yeentsuku ezimbini kwaye inkwenkwe yandixelela ukuba ingavulwa, indinike ngaphandle kwe-chip kwaye ndifuna ukuyibuyisela kuye, UAllah, umniniyo, kodwa andazi ukuba ndenze njani, ndifuna uncedo
Molo, ukwazile ukufumana ulwazi lomnini? Kwenzeka into efanayo kum kwaye andazi ukuba ndingayifumana njani idatha yomnini
Ndine-iPhone s4 kwaye bendikwi-disco ndiyifumene kwaye ngengomso besele ndikwi-data verification okanye ndazi njani ukuba ngubani
Molo ekuseni, NDINGUMPHATHI WESITESHI SEGESI, KUNYE NOMXHASI WANDISHIYELA IPHONE YAKHE 4 NGOKUBA IKHADI LAKHE LIYABONAKALA NJENGOKUBA LIYENZIWE, WATHI UZABUYA NGEVEKI KWAYE KUBE ZIINYANGA EZIMBINI NDINGABUYI, NDABUYA 'CINGA UKUBA AZOKUBUYA NGOKWENZEKA UKUBA KWENZEKA IIVEKI EZI-2 ZISHIYE I-CHIP YAKHE IPHONE IPHUMELELE BATTERY YAKHONA, AKUKHO INGXELO YOBUBI NDIYAZI UKWENZA LOMTHENGA KODWA ANDIYAZI INDLELA YOKUQHAGAMSHELANA NALO MXHASI UKWAZI UKUBA UYA KUYA BUYELA UKUZE UHLAWULEKE OKANYE UNGANIKI NDINIKE ISAZISI SAKHE UKUZE NDIBE NOKUQINISEKISA UKUTHENGISWA KWAM NOKUTHENGISA KWAKHO ENKOSI NAKUSASA
Molo, bandithengisele i-iPhone 5 evaliweyo kwaye ndifuna ukuyibuyisela kuwe kwaye andifumani ndlela yokudibana namapolisa, andizukuyithatha, ndifuna ukunxibelelana nomniniyo
Yeyona nto ibaluleke kakhulu ngaphambi kokuthenga i-iPhone okanye nantoni na kwi-Apple ukwazi ukuba ivaliwe yi-icloud, bayifumene kodwa kulungile.
Ndifuna ukubuyisa i-iPhone, bayithengisela kum kodwa bandikhohlisa, ngoku ndifuna ukuqhakamshelana nomniniyo kodwa andazi ukuba ndenze njani kuba iseli ayisebenzi.
Ndifumene i-iPhone kodwa kubonakala ngathi yeyasemzini kwaye iqhosha lamandla alilunganga, ndingayiqala njani kuba andifuni kuyisa emapoliseni kwaye ndiyamthemba uKeno ..
Enkosi ngenqaku lakho malunga nokufumana i-iPhone kunye nee-iPads kwimeko yobusela. Ndiyiblogger ekhethekileyo kwesi sihloko kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba isoftware eyodwa inokuthintela iimeko ezingafunekiyo. Fumana okuninzi kwibhlog yam:
Yonke into oyifumana kwiwebhusayithi yam inomdla kwaye ichanekile ngolwazi.
Umbuzo: iphone 5s ibiwe ndiyibeke kukhangela oku iinyanga ezintathu, namhlanje ndifumana umyalezo ovela kwi-icloud othi bayifumene, kodwa andiyiboni emephini, itsho i-Offline. Emva koko ndifumana i-imeyile evela kwi-icloud nayo ithi ifunyenwe kwaye indawo ekuyo iya kufumaneka iiyure ezingama-3 kodwa ayiveli kwimephu. Ndingenza ntoni ukuyibona, enkosi!
Ngama. 654 sitsho
molo noba uvelaphi? Ndithi nangona amathuba okuba mncinci kakhulu kutsha nje (iintsuku ezimbini okanye ezintathu) bathengise i-iPhone 5s kumhlobo ovaliweyo kwaye kuyabonakala ukuba bazamile ukuqala kwakhona kwaye "umthengisi" wamxelela: uyicimile malunga neenyanga ezintathu ezidlulileyo kuba andiyisebenzisi…. kwaye ndiyigcinile okoko kwa ezo ntsuku zimbini okanye zintathu ndiyiphindayo ayinakulindeleka kodwa mhlawumbi mhlawumbi
Ndisuka kwidolophu yaseMaipú, eSantiago, eChile. kodwa kuyacaca ukuba bangene kwi-icloud yam bakhupha i-iphone 5s kwirejista yam, ngoku andiboni ngoku kwi-«Fumana iphone yam». Kuyabonakala ukuba ndiyilahlile.
Ndifuna ukufumana umnini we-iPhone ovela e-USA ulahlekile kwaye andazi ukuba njani
yayiyinto embi yokuthenga ngaphandle kokwazi okuninzi ngayo
molo, ndifumene iphone izolo eMadrid. Ndizamile ukukhangela umniniyo kodwa andinakwenzeka kuba ufuna ikhowudi oza kungena kuyo, ngenxa yoko andinakukwazi ukufowunela naliphi na inani, akukho mnxeba ungenileyo. Namhlanje ndiyise kumaPolisa eSizwe ukujonga ukuba angamfumana na umnini-ndawo kwaye andixelele ukuba ngenombolo ye-IMEI yale fowuni, ayibonakali ngathi iyatyholwa. Bathathe umnxeba yiloo nto. Ke yintoni ichafón ekugqibeleni engafikeleli kumniniyo. Ndicele ukuba bandinike isatifikethi sokuhambisa ukuze ndibenenombolo ye-IMEI, kwaye ndiyazi ukuba ndibhaliswe kwiorenji. Ngaba ikhona indlela yokufumana umnini wayo?
Ndifumene i-iPhone 6
Kodwa ivela kwelinye ilizwe, ndiyibuyisela njani kwaye ndingenangxaki okanye into yokudibana nomniniyo
Molo, ndivela eCosta Rica, umamazala usebenza kwisikhululo sebhasi, kwenye yezi bhasi bafumana i-iPhone 5, wayigcina kangangeenyanga ezintathu okanye kunjalo, elinde ukubona ukuba umntu angayicela na, kodwa hayi, emva koko wayinika umyeni wam kunye nam, sayilayita kodwa ivaliwe, ndiyabona kuphela imei, ukusuka apha ukuya apho ndinganxibelelana khona ukuze ndicele ulwazi! Enkosi
Molo, ndivela ePeru, i-iPhone 6 yam ibiwe, ndayifaka kwimowudi elahlekileyo, ndashiya umyalezo kwiscreen sakho sokutshixa, kodwa ndinomyalezo kwiselfowuni endiyisebenzisileyo kwaye bandixelele oku: Isilumkiso! Icloud iphone 6 kwimowudi elahlekileyo okanye ebiweyo ibekwe, jonga indawo ekuLogin.findmyiphonelost.com. Ndifuna ukwazi ukuba zichanekile na okanye hayi. Ndiyawaxabisa amagqabantshintshi okanye ukuba oku kwenzeke komnye umntu
Ndithenge iPhone 5s ndathi xa ndiyibuyisela, kwavela umyalezo womnikazi onenombolo, ndafowunela loo nombolo bandixelela ukuba balahlekanga iselfowuni, ukuba ndizokukhwabanisa enye, ndizomthinta njani ngoko?
Iidigri zeAngelo sitsho
Le nkampani iya kufuna kuphela i-IMEI ukuba ikunike "INKXASO YOKUGQIBELA" kwaye ekugqibeleni incede ekufumaneni umniniyo. Uthetha ukuthini ngenkxaso yesiphelo? Ngaba baya kuqhagamshelana nam nomnini we-iphone? Ndiyathemba ukuba uyakucacisa ukuthandabuza kwam nceda.
Phendula u-Angello Grados
Ndine-iphone 6 evalwe yi-Icloud, isuka eSprint kodwa ayinayo i-chip kwaye ayindivumeli ukuba ndifikelele nantoni na, cela iakhawunti ngokukhawuleza ukuze ndingaboni oonxibelelwano okanye nantoni na, tsalela umnxeba uSprint uze ubaxelele imeko Ndabaxelela ewe ngenombolo ye-IMEI banokundinceda ndifumane umniniyo kwaye impendulo yayingu: HAYI.
Nceda, ndifuna ukubuyisa i-iphone 5s endiyifumene eArgentina kunye ne-United States, kodwa andifumani ndlela yokwenza ngayo ukuba umntu unefom, nceda ubhalele Abertutti@gmail.comUkuba umntu uyayazi indlela yokwenza, thumela kum kwaye nceda ungafuni ukuba bachithe ixesha lam, kufuneka ndiyibuyisele kodwa kumniniyo, enkosi ANGELO
Molo, ndifumene i-iPhone 6 ilele esitalatweni, iscreen sonke siphukile, iifowuni zingena kodwa andikwazi kuphendula okanye ukubona nantoni na, ndingamfumana njani umsebenzisi we-icloud edibene nokukuthumela i-imeyile ? Ndiyabona ukuba iqhaga le-icloud lenzelwe i-imei
Nceda ndifumene i-iphone 5s kwi-boulevard yaseSan Rafael kumbindi weHavana Cuba enelayini yaseMelika esuka eVerizon, ukuba umntu ulahlekelwe yifowuni undithumelele ii-imeyile abertutti@gmail.com kwaye ndiza kuyibuyisa, i-hug nceda kuphela kwendlela yokwazi ukuba ingumnini na ukuza kum kwaye ubeke iphasiwedi yokuvula phambi kwam okanye uyithumele kum kwaye ndiza kuyibeka emva koko ungumnikazi, hayi bayandikhathaza ukuphanda okanye ukundibuza imibuzo engaqhelekanga
Bashiye i-iPhone 5s elityelwe apho iifowuni zilayishwe kwisikhululo seenqwelomoya eColombia ... ine-iCloud yokungena ... isuka kwinkampani eseCanada ... kwaye ikwimo yenqwelomoya ... ndifuna ukuyibuyisa ... kuba andithandi yenzeke kwi-ñ yam ... ndiyidibanisa neTunes kwaye ndifumana uMaria Camila ... kodwa akukho enye into ... yintoni enokwenziwa ????
Ukuba ndifumana i-iPhone 6 eSpain, zama ukuyibuyisa, ndiseColombia, ngaphezulu okanye ngaphantsi kweenyanga ezi-4 ezidlulileyo ndiyifumene, kunokwenzeka ukuba baya kuyifumana apha?
Ndiyifumene kwaye ibinomyalezo wokubuyisa umvuzo kunye nenombolo yomyalezo oza kufowunelwa. Nxibelelana nomnini kwaye aphendule hayi enkosi .. oko kuthetha ukuba ndiyayigcina? Indlela endiyifumene ngayo ?
Ukuba kukho umvuzo kwaye awufuni ukuwuhlawula, ngaba ndinelungelo lokuwufuna?
Ndifumene i-iPhone 5 kwaye andazi ukuba ndinxibelelana njani nomniniyo (a) uvela kwelinye ilizwe ngenxa yesim ebendinayo, umntu angandinceda enkosi
Ndidinga umnini we-iPhone 4 ukuvula kwaye ikwathengwa nesekeni
Ndibiwe iphone 6 yam kodwa its been a month ndingayifumani indawo yayo.
Ndifumene i-iPhone kwi-camellon ye-avenue eJalisco kubonakala ngathi bayilahlile kuba umntu ongaphandle komniniyo akakwazanga ukuyisebenzisa kuba ibingenayo i-chip ke k impumlo yenkampani okanye nantoni na x isitayile endifuna ukuyibuyisa kodwa i-vdd andazi ukuba uyifumana njani umniniyo njengoko ndiyenza ukumfumana kuba andifuni naziphi na iingxaki nangaphantsi kweselfowuni enkosi
Ukuba umnini ufake idatha yabo kwisicelo sempilo. Ukunika i-SOS, idatha yezonyango iya kumshiya umnini nokuba ngubani ofowunayo. Kananjalo ukuba ubuza i-SIRI ukuba ngubani umnini we-iPhone, iya kufumana unxibelelwano lomniniyo. Ukuba umfowunelwa wakho uyiqwalasele kwidatha yam.
UElizabeth jimenez sitsho
Ndilahlekelwe yi-iPhone 6 kunye nehostele eMadrid, ibizwa ngokuba ngumhlala-phantsi waseCorbero, kwaye inkcukacha kukuba ndiyilibele esofeni ngelixa bendikhangela iphepha lam lenqwelomoya, ndemka apho ndingayicholanga, emva kwemizuzu eli-10. Ndiye ndayiqonda ndabuya ndabuyela kulendawo, ewe xa ndishiya indawo bekukho kuphela umntu obeyijongile kodwa xa ndibuyayo akasandibuyiseli, namhlanje ndifumene isaziso sokuba ndiyifumene kodwa ayindinikezi ukuba ndibone phi kwaye ngubani onayo.
Ngaba ikhe yenzeka komnye umntu kwaye babenethamsanqa lokuyibuyisa? Kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba itshixiwe nge-ductile footprint kwaye ikwavulwa ngamanani.
Phendula uElizabeth Jimenez
Ndifumene i-iphone 6+ kwisikhululo seenqwelomoya, ngelixa bendikhwela inqwelomoya bendigcina umnxeba ubonakala xa kunokwenzeka umntu ayibone esandleni sam wandicela ukuba ndiyibuyise. Ngokubonisa abasebenzi beenqwelo-moya kuye kwafuneka ndiyicime xa sihamba. Ukufika kwam kwindawo endiya kuyo ndiyivule kwaye kwiscreen ndibone umnxeba ophosiweyo ukusuka kwinombolo, bendifuna ukubuyisela umnxeba nge-iPhone efanayo, kodwa yandibuza ikhowudi yokuvula, ebendingayazi. Njengokuba bendicela inombolo yokuvula, ndiyekile ukubona inamba ekufuneka ibuyele kuyo umnxeba, kuye kwafika into yokuba ndiyicime ndiyivule kodwa ngefowuni esesandleni ukuze xa isaziso somnxeba esiphosiweyo sivele kwakhona, qaphela inombolo kwaye ucofe kwelam. Ukuqala kwakhona ikhompyuter kwaqala ukucima yonke into kwaye yayifektri.
Ndiyise kumnikezeli ngenkonzo yemfonomfono "yabachaphazelekayo", ndacela ukuba ibekwe yi-imei kwindawo yogcino lwedatha kwaye bazakumnika inombolo yam, umntu ondiphendulileyo uphendule ukuba (IMEI) umnxeba awubhaliswanga njengoko kuthengiswa ngabo kwaye ke abanayo indlela yokufumana umniniyo. Ndicebise i-SIM folio xa ndiyibonisa indixelela ukuba njengokuba iyi-nano sim, amanani anokuchonga kuwo umgca wawo ukuba anqanyuliwe. Ndicele inenekazi ukuba lenze ntoni ukuba ndifuna ukuyibuyisa, andiyidingi. kwaye andixeleli NALUTHI.
Ndiyathemba ukuba umnini uyakuyifumana esebenzisa isixhobo sendawo, nangona sele ndirhoxisile umgca wale SIM, kodwa ndiyathemba ukuba nge-IMEI ndingayifumana, ndisenayo i-SIM yayo ngaphakathi kwaye ndiyitshintshele ngokusisigxina kwi-Wi-Fi inethiwekhi, elinde ukuba ifikeleleke.
Phendula kwi jwesleymch
UBrian ghoul sitsho
Molweni, ndingathanda ukwazi kumnini we-iPhone 5 oza kundinika ukuba ndiyibhebhise kwaye ndisisidenge ndanikela ngemali yombambisi kwaye lowo undenze ukuba ndidlale khange abenayo imali endimnike yona kwi-pawn kwaye ndifuna ukunxibelelana nomnini ndingathanda uncedo lwakhe
Phendula uBrian Ghoul
Ingelosi u-Enrique Paredes Grandez sitsho
Molo, ndivela ePeru, ndathenga i-iPhone 6s yesibini kwaye ivaliwe nge-id kunye negama lokugqitha kwaye sele ndinxibelelana nomnini echaza ngokwenzekileyo kwaye uFella undixelele ukuba bayibile kodwa andinatyala ekuthengeni ndingathanda I-quirks inceda ukuba ingasasebenzisi kwaye uvela eBrazil
Phendula Ingelosi u-Enrique Paredes Grandez
umbuzo ... ubunokwenza ntoni kwimeko yam? Qaphela ukuba i-ex yam yandithengisela i-iPhone 5 emva koko yandibuza ngephasiwedi kuphela kwaye yamnika ikhansile kwaye umyalezo wayeka ukuphuma kwaye ndingangena kwimisebenzi yayo, kuba kuye kwafika kum ukuyivuselela kwaye ndiyenzile loo mpazamo kwaye namhlanje indibuza i-apile id kunye negama lokugqitha, ubunokwenza ntoni ukuba unayo i-imeyile yomnini we-iphone, ungamfowunela ukuze uyisuse kuluhlu lwezixhobo ezikwiakhawunti yakhe ye-icloud?
Ndiyivuselele kwi-ios 10 kuba ibine-8.3 kwaye kuba ivuliwe ukufumana iphone yam indibuza umsebenzisi kwaye ndiyidlulise, xa indinike yona ukuba ingangena kwi-interface ye-iphone iyonke kodwa xa uyihlaziya Iyandibuza lonto, kodwa ndiyayazi i-imeyile yomniniyo kwaye use-USA nakwintombi endiyithumela kuye ndiyithumela kuye kunye ne-ex yam yoyika ukuba le ndoda izothetha ngapha ibuze abazali ukuba bayithengisile na ndizombuza x kuye, yiyo loo nto ndingazi ukuba ndenze ntoni xa ndimthumelela i-imeyile esele ndinayo ukuba ndiyithumele okanye ndithini?
into eyenzekayo kukuba angafuni ukundinceda ngalonto ngenxa yenceba, kuba sekudlule unyaka eyithumele kuye
Ndifuna ukwazi ukuba ngubani umnikazi we-iPhone 6 kwaye ndiyibuyisele kubo.Ndifanele ndenze ntoni? Enkosi une-akhawunti ye-icloud etshixiweyo
Ndifumene i-iPhone 6s kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ungamfumana njani umniniyo, ezi zedatha xa umntu engena apha evela kwingxelo ye-ID ye-Apple kunye negama lokugqitha elalisetyenziselwa ukumisela le iPhone. (4✔️
imanuel maza sitsho
Ndine-iPhone 6 kodwa ikwi-icloud
Phendula uManuel Maza
Molweni, bandinike i-iphone 4 kodwa indibuza isazisi kunye negama eligqithisiweyo.Ndingathanda ukufumanisa kumniniyo kodwa kwaApple abanikanga lwazi luluncedo .. Ukuba umntu sele eyazi indlela yokwenza oku, nceda ndibhalele kwi-imeyile nico.113@hotmail.com
Ndifumene i-iPhone 6s kwaye ndifuna ukufumana umnini wayo, ndingenza njani?
Kwenzeka into efanayo nakuwe, bandithengisela i-iPhone 5 ngo-150 kwaye yayicinyiwe ke xa ndifika endlwini yam ndayivula kwaye ndinayo ikhowudi yokungena ngalo mzuzu ndabona ukuba bayivimbile kuba bayayifuna kwaye ngoku andazi ukuba yeyiphi inkampani okanye igama ndazi kuphela ukuba igama lomntu liqala ngo-f.
hahaha, ndiyekile kwaye ndachama ... isixhobo esingenamsebenzi kwaphela nge-icloud…, hahaha, shit ku…, ipleyiti ixabisa ama-20 eerandi kwi-aliexprees, yitshintshe imizuzu eli-12, sele uneselfowuni entsha…., ungakhohlisi abantu, emva koko bayakholelwa ukuba ngokwenza i-akhawunti yomthi wama-apile kunye nokuzalisa iipokotho zabo ngakumbi, baya kuba neselfowuni ngonaphakade becinga ukuba baya kuyibuyisela kubo ngokuba ibhlokiwe ..., hahahaha, kunjalo ...
Ukuthenga iselfowuni ngewaka leedola ukuze ubhale kwi-wat kwaye wenze iminxeba ..., andikhe ndiphawule ngaloo nto ..., emva koko ndiyilahle okanye ndibile ... 100 kuye kwenye ye-1000 kuyacaca ukuba andizukuya ngaphi ..., nditsho kwakhona ekugqibeleni ..., kwaye oku kwenzelwe abo bafumene ibhloko ..., musa ukukrwela entloko ngala manqaku kunye newaka abanye, thenga ipleyiti, vula ividiyo elungileyo ye-youtube ukuze ulandele amanyathelo kwaye uzitshintshe ..., sendisele ndithethile ngama-20
Ndifumene i-iPhone 8 kwaye ukuza kuthi ga ngoku khange bayiphawule le ngegama likaXimena Vilchis ukuba umntu uyamazi okanye uyazi malunga nokufowuna kwakhe 5586908130 ukuyibuyisa
357275093012331 le IMEI, nceda unxibelelane nam
Iseli ngu-XS ubuninzi.
UJuan Luis Prado akananto sitsho
Ndilahlekelwe yi-iPhone 7 ndakhangela i-iPhone yam yandinika indawo ndaya apho ibikhona kwaye kwavela ukuba yindawo yokuhlala kwaye unogada akandivumeli ukuba ndingene ndizokuphanda ngokuqhubeka kwetyala, undixelele kuphela ukuba ingxelo yayiza kudlula, kuya kuba bubulumko ukwazisa amapolisa kwaye ucele uncedo lokufumana ifowuni yam?
Phendula uJuan Luis prado negrete
Uphengululo lwevidiyo kunye nerafuli yenkqubo yeMoneyWiz [UPDATED]